Akụkọ - Otu esi ahoputa slurry pump?
Olee otu ịhọrọ slurry pump?
Mgbe ị na-ejikwa slurries, ndị ọrụ na-aghakarị ịhọrọ n'etiti ihe ndị a na-etinye na roba ma ọ bụ nke ígwè maka nfuli slurry ha. Isiokwu 1 na ngwụsị nke isiokwu a na-enye nchịkọta nchịkọta nke atụmatụ abụọ ahụ.
Slurry bụ mmiri mmiri nwere ihe siri ike kwụsịtụrụ. Na abrasiveness nke slurry na-adabere solids ịta, ekweghị ekwe, udi, na ihe siri ike urughuru kinetic ike zigara mgbapụta na-ebupụta. Slurries nwere ike imebi na / ma ọ bụ viscous. Ihe siri ike nwere ike ịgụnye ego ntaramahụhụ ma ọ bụ nnukwu ihe siri ike nke na-adịkarị na ọdịdị na nkesa.
Chọpụta oge iji mgbapụta nke centrifugal nwere ike ịbụ mkpebi siri ike. Ọtụtụ mgbe ego nke slurry pump bụ ọtụtụ oge nke nke ọkọlọtọ mmiri mgbapụta na nke a nwere ike ime ka mkpebi iji slurry mgbapụta siri ike. Otu nsogbu n'ịhọrọ ụdị mgbapụta na-ekpebi ma mmiri a ga-agbapụta ọ bụ slurry. Anyị nwere ike kọwaa slurry dị ka mmiri ọ bụla nke nwere ihe siri ike karịa nke mmiri nwere ike ị .ụ mmiri. Ugbu a, nke a apụtaghị na a ga-eji mgbapụta slurry mee ihe ọ bụla na ngwa ọ bụla nwere ihe siri ike, mana opekata mpe mgbapụta slurry kwesịrị ịtụle.
A na-ekewa slurry pumping na ụdị ya dị mfe n'ụzọ atọ: ọkụ, ọkara na slurry dị arọ. Ke ofụri ofụri, ìhè slurries bụ slurries na-abụghị iji na-ebu siri ike. Ọnụnọ nke ihe siri ike na-eme na mberede karịa imewe. N'aka nke ọzọ, slurries dị arọ bụ slurries e mere maka ibufe ihe site n'otu ọnọdụ gaa n'ọzọ. Ọtụtụ mgbe mmiri na-ebu ibu na nnukwu slurry bụ naanị ajọ ihe dị mkpa na-enyere aka ibuga ihe achọrọ. Ọkpụkpụ slurry bụ nke dara n'otu ebe n'etiti. Ohaneze, Pasent solids na-ajụ slurry ga mbio 5% na 20% site na ibu ibu.
Mgbe emere mkpebi siri ike banyere ma ị na-emeso nsogbu dị arọ, ọkara, ma ọ bụ nke dị nfe, ọ bụ oge iji kwado mgbapụta na ngwa ahụ. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke njirimara dị iche iche nke ọkụ ọkụ, ọkara, na oke slurry.
● Ọnụnọ nke ihe siri ike bụ na mberede bụ na mberede
● Nri siri ike <200 microns
● Na-edozi slurry
● Ike ndọda slurry kpọmkwem <1.05
● Erughị 5% solids site na ibu ibu
Ids Solids siri 200 microns ruo 1/4 anụ ọhịa (6.4mm)
● ttọ slurry idozi ma ọ bụ na-abụghị idozi ya
● Ike ndọda slurry ahụ <1.15
5% ka 20% siri ike site na ibu
● Slurry bu ebum n’uche bu ibufe ihe
Ids Solids> inch 1/4 (6.4mm)
● Ike ndọda slurry kpọmkwem> 1.15
Ukwuu karịa 20% solids site na ibu ibu
Ndepụta gara aga bụ agụụ ngwa ngwa iji nyere aka kọwaa ngwa mgbapụta dị iche iche. Ihe ndị ọzọ ekwesiri ilebara anya mgbe ị na-ahọrọ ụdị mgbapụta bụ:
● Ihe isi ike
Le urughuru udi
● ọsọ ọsọ na ntuziaka
Ndị na-emepụta nfuli slurry ewerewo ihe niile dị n'elu wee chepụta nfuli iji nye onye ọrụ kachasị ndụ kachasị atụ anya. Na nwute, enwere ụfọdụ nkwekọrịta nke emere iji nye ndụ mgbapụta a nabatara. Tebụl dị mkpirikpi na-egosi njirimara atụmatụ, uru, na nkwekọrịta nke mgbapụta slurry.